Nalain’ny jiolahy enin-dahy nitondra basy Kalachnikov sy PA an-keriny koa ny tovolahy iray 20 taona, zanaka karana, afakomaly antoandro tao Ampasimbe Onibe Toamasina II. Saika hanao vakansy ao Foulpointe ity tovolahy ity, saingy izao lasan’ny jiolahy izao. Fiara 4×4 no nampiasan’ireo olon-dratsy nandritra ny fakana an-keriny. “Any am-pelatananay izy”, hoy ireo jiolahy raha niresaka tamin’ny fianakaviany tamin’ny findainy.
Notafihin’ny jiolahy miisa efatra nisaron-tava ny fivarotana iray eny Amboanjobe, afakomaly hariva. Niditra an-keriny tao am-pivarotana ry zalahy tamin’io fotoana io. Tsy nanampo na inona na inona ireo tao am-pivarotana fa ny feom-basy efa nipoaka no nahataitra ny olona teo an-tanàna. Lasan’ireo olon-dratsy ny vola rehetra tao am-pivarotana. Tonga teny ny zandary taorian’izay.
Mbola mitohy ny fikarohana ilay botry nalain’ny jiolahy an-keriny niaraka tamin’ireo takalon’aina tao Besalampy, ny alatsinainy teo. Olana ny tsy fahampian’ny fitaovana eo anivon’ny zandary sy ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina. Na eo aza izany manao izay ho afany ny zandary amin’ny fikarohana. Ramatoa iray sy ny zafikeliny no lasa takalon’aina miaraka amin’ny entana tao anaty botry. Karohina koa ny mpiasa roa lahy tamin’ity botry ity.